Tantera-drano Camping trano-lay, matory Bag, fitsangatsanganana bodofotsy, lamba famaohana Beach - Green Camping
maina haingana lamba famaohana
faritra vaovao ampondra & rohy pas de
Real House lay
High quality ultralight Neny a kitapo fatoriana
Lamba sac de couchage
Na dia ny lay tsy tantera-drano ihany no mifandraika amin'ny tsanganana ny habetsahan'ny rano ny lamba, ny zava-dehibe indrindra ny famolavolana sy ny hafa. Tsy toa mora, fa maro ny trano rantsan-kazo eny an-tsena tsy tantera-drano, na dia voalaza rano 5000mm tsanganana. Misaotra an-trano orana fitaovana fitsapana, izay ho azo tanterahina ny mazava ny orana mba haka an-keriny amin'ny fotoana rehetra, dia hanampy antsika hahita izay mitete mety mba hahazoana antoka antsika ho afaka hamokatra feno trano-lay tantera-drano.
Inona no fanjairana fanorenana ny kitapo fatoriana? Izany ve no mety tsara ho an'ny tanjona? Ve ny mpamatsy nilaza taminareo izay fanorenana no ampiasaina ho an'ny kitapo fatoriana sy ny endri-javatra tsirairay fanorenana? Raha ny mahazatra, dia misy fanorenana 2 samy hafa eny an-tsena, ny H sy ny efi-trano roa chamber.The H H ambony dia tsotra sy fanorenana malaza indrindra, manjaitra ny akorany, insulation sy miara-milahatra mivantana. Io fanorenana no matetika ampiasaina ho vanin-taona mafana-lohataona modely.
Fantatrao ve hoe firy sosona ny fitsangatsanganana bodofotsy, inona ny ao anatiny? Inona no endri-javatra isan-karazany ny tsirairay fitsangatsanganana bodofotsy? Tsy ara-dalàna manao toy izany. Acrylic, POLAR volon'ondry & pirinty polyester ho ambony fitaovana, PE & aluminium foil, PEVA, tantera-drano Oxford ho ambany. Spaonjy & polyester fibre toy ny fitaovana afovoany. Ny sasany ihany no manana fitsangatsanganana bodofotsy 2 sosona. Mety mahita zavatra hafa eny an-tsena, ho antsika, fa tsy misy olana. Izahay, ka mamoaka mihoatra ny 1.000.000 ny fitsangatsanganana isan-karazany bodofotsy, Izaho matoky isika zavatra tsara ho anao. Raha mila fanazavana fanampiny, azafady jereo ao amin'ny FAQs na mifandray antsika.